खेल / अनुप्रयोग / वेब / आईओटी विकासको शक्तिशाली तालिम - खेल विकास, अनुप्रयोगहरू, वेब प्रणाली, आईओटी विकास र अपरेसनमा यसलाई छोड्नुहोस्!
वेब प्रणाली / आवेदन / आईओटी सेन्सर विकास
フ ェ イ ブ ッ ク (आधिकारिक)
नयाँ के हो?
शक्तिशाली शिल्पमा नवीनतम जानकारी
[प्रेस विज्ञप्ति] सुपर रियल माहजोंग P8 जारी गरियो
गर्मीको छुट्टीको बारेमा
हामीले फ्याक्स ट्राफिक अनुप्रयोग रिहायौं
हामी तपाईंलाई निपटान सर्भरमा जडान गर्न समर्थन गर्नेछौं जसले TLS 1.2 लाई समर्थन गर्दैन
ड्रैगन ड्रैगन शोगी अनलाइन (भविष्यफोन संगत) सेवा बन्द गरिनेछ
यो शक्तिशाली शिल्पको काम हो
स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरूबाट (आईफोन / एण्ड्रोइड), सामाजिक खेलहरू र उपभोक्ता खेलहरू, कृपया परियोजना योजना, सर्भर पूर्वाधार, अनुप्रयोग विकास, ईवेंट प्रबन्धन सहित सम्वन्धित हुनुहोस्। हामी आफ्नो आफ्नै मोबाइल फ्रेमवर्कसँग स्थिर गुणस्तर प्रोग्राम प्रदान गर्दछौँ। हामी विदेशी क्यारियर टर्मिनलहरूमा खेल प्रस्ताव गर्दछौं, कृपया प्रत्येक देशलाई स्थानीयकरणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मोबाइल र वेब समाधान
हामी एक स्टप सेवा ~ ~ डिजाइन ~ उत्पादन ~ अपरेसन ~ योजना बाट योजना प्रदान गर्दछौं। हामी घरको उत्पादन द्वारा प्रतिक्रिया गतिको साथ प्रतिक्रिया गर्नेछौं र यसका लागि क्लाउड सर्भरको तुलनामा उत्पादन र संचालनको अनुसार उत्पादन गर्नेछौं। हामीसँग धेरै स्मार्टफोन साइटहरू, एचटीएमएल अनुप्रयोगहरू, एसएनएस खेल विकास, पीसी साइट निर्माण, क्लाउड निर्माण र सञ्चालनको ट्रयाक रेकर्ड छ। हामी लोडमार्ग लोड गर्न सक्दछौं, अनुसन्धान / पत्राचार समस्या, सर्भर स्थानान्तरण आदि। कृपया तपाईंको कम्पनीको साझेदारको रूपमा सबै साधनको रूपमा सोध्नुहोस्। हाम्रो व्यापारिक अनुप्रयोगको वेब अनुप्रयोगको धेरै उपलब्धिहरू छन्!
हामी VR सामग्री निर्माण, वीआर मनोरञ्जन प्रणाली, परिचय आदि प्रस्ताव गर्नेछौं।
सोही खेलमा MightyCraft बाट राम्रो छ, नया ब्रान्ड आरामदायक अनुप्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, प्रविधि प्रदर्शनी उपकरण देखा पर्दछ! यदि यो सानो संभावनाहरु संग पनि दिलचस्प लग रहेको छ यो यसलाई आकार हुनेछ! विश्वासको साथ एक शक्तिशाली टेक्नोलोजी "शक्तिशाली शिल्प" पत्ता लगाउन ठाउँको रूपमा, म भविष्यमा "उल्टो स्टूडियो" बाट छुटकारा जारी राख्छु!
हामी केहि उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यहाँ 400 भन्दा बढी अनुप्रयोगहरू अनुप्रयोगहरूको लागि र वेब प्रणालीहरूको लागि 50 भन्दा बढी साइटहरू छन्।
सुपर रियल महान्ज
Kokkuma को रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट
सजिलो शोगी अनलाइन
ड्रैगन राइडरको काउन्टर
जेब बिलियर्ड3डी
भाग्य पुस्तकालय वीआर
शक्तिशाली तालिम प्रविधि ब्लग
Chatwork मा एक बट बनाउनुहोस् (1) - php संग webhook
तपाईं Chatwork API को लागि webhook प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ / यदि तपाइँसँग वेबहोक छ भने तपाईं Chatwork मा बोस् सकते / वेबहोइन प्रिन्फिगरेसन प्रयोग गरेर / PHP सँग वेबहुकु द्वारा पठाएको डेटा पुष्टि गर्नुहोस्।[...]
Sapporo र DS-Lite (IPv6 IPoE) जडानमा फिलेट स्पीड कमी
Sapporo कार्यालय मा, एनटीटी को ओप्टिकल फाइबर लाइन FLET को गति को कमी एक समस्या थियो। FLET को प्रकार एक अपार्टमेन्ट प्रकार 100 एमबीपीएस प्रकार हो। यो दिनको समयमा समस्या छैन, तर दिनको आधारमा साँझको गति घटाउने नौकरी हो[...]
लिनक्स विभाजनको आकार बदल्नुहोस् (आदेश रेखा)
हालको मिडिया क्षमता उच्च मूल्य भन्दा कम छ। धेरै वर्षअघि सर्भर भण्डारण र मेमोरी मिडियासँग तुलना, मूल्य धेरै पटक क्षमता छ र मूल्य एक अंश हो। यस समयमा, मैले लिनक्स पुरा डिस्कलाई एक ठूलो क्षमता ड्राइवमा प्रतिलिपि बनाएँ[...]
Windows XP मा Cygwin पुन: स्थापना गर्नुहोस्
यो रुंसम प्रकार भाइरस (Ransomware) को रोना चाहिएको प्रवृत्ति हो, र यो थाहा पाएको छ कि विन्डोज एक्सपी अझै संसारमा सक्रिय छ। यद्यपि माइक्रोसफ्ट समर्थनबाट बाहिर हुनुपर्छ, माइक्रोसफ्टले प्याच बाहिर निकाल्छ। हो, मेरो[...]
यामाहा NVR 500 सम्म हिपारी डेन्वाको एसआईपी क्लाइन्टमा जडान गर्नुहोस्
यो टोक्यो हेड अफिसको एन हो। मैले यामाहाको राउटर "NVR 500" लाई "हिपारी डेन्वा राउटर" PR-S300NE को एसआईपी क्लाइन्टको रूपमा जडान गर्ने प्रयास गरे। पछाडि "हाइपरारी डेन्वा रूटर" हो NTT स्थापित भएको थियो "PR - S300NE"। हात[...]
स्मार्टफोनको साथ VR स्थिति ट्रयाकिङ
यो सापपोरो कार्यालयको जे छ। स्मार्टफोन उपकरणहरूसँग आन्तरिक अनुसन्धानको भागको रूपमा स्थिति ट्र्याकिङको अनुभव गरिएको छ। यो कुरा जुन म चाहन्छु, गतिको स्थिति जस्तै VR (भर्चुअल वास्तविकता) मोडमा हिंड्नु र यसको समिकरण गर्नुहोस्। केवल स्मार्ट फोन संग,[...]
मोडेलहरू अपग्रेड गर्नुहोस् विन्डोज 10 सँग मिल्दो छैन
यो टोक्यो हेड अफिसको एन हो। विन्डोज 10 लाई नि: शुल्क अपग्रेड अवधि जुलाई29 को तय गरिएको छ, त्यसैले घरको स्तरवृद्धि भइरहेको छ। विन्डोज 10 अनुक्रमित अप्रयुक्त मिसिनहरूमा राखिएको छ, तर विन्डोज 10 उपयुक्त छैन[...]
FuelPHP को साथ डीबी क्षैतिज विभाजन समर्थन
यो Sapporo कार्यालय को K छ। परम्परागत रूपले, एक सर्भर प्रणाली (LAMP वातावरण) को निर्माणलाई यसको आफ्नै ढाँचाको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो, तर हालको वर्षहरूमा अधिक खुल्ला स्रोत ढाँचाहरू प्रयोग गरिँदैछन्। हाम्रो आफ्नै ढाँचा पनि खराब छैन[...]
तपाईं एकता WebGL सँग के गर्न सक्नुहुन्न
यो टोक्यो हेड अफिसको जी छ। यो एकता लामो समयसम्म भएको छ किनभने युनिटीले वेबजीएलसँग सम्बन्धित छ, तर यो आज वेबजीएलमा अपेक्षाकृत अपरिचित जापानी जानकारी देखिन्छ। आज मैले गरेको दायरामा छ, तर एकता वेबजी[...]
इनिटीसँग 123D क्याप्चर र प्रदर्शनको साथ फोटोबाट 3D मोडेल सिर्जना गर्नुहोस्
यो Sapporo कार्यालय हो। मैले 3D मोडेलहरू AutoDesk 123D क्याच प्रयोग गरेर सिर्जना गरेको एकतासँग प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरे। 123D क्याच एक अनुप्रयोग हो जुन तपाईंलाई 3D मोडेल डेटा फोटोहरूबाट सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ[...]
एमआई बिल्डिंग3एफ 2-8-5 मिनिमी इकबुकुरो तोशिमा-कि, टोक्यो
साप्पोरो कार्यालय: 〒 060-080 9
होक्काइडो साप्पोरो सिटी किता-किट99 - वेस्ट4- च्याम 10 -3गैलेरिया2एफ
प्रतिलिपि अधिकार (सी) 2018 शक्तिशाली तालिम कम्पनी